Al-Kataa’ib Oo Baahisay Qeybtii 1-aad Silsilado Loogu Magacdaray Boorri Mu’miniinta (DAAWO+AKHRISO) – Bogga Calamada.com
Al-Kataa’ib Oo Baahisay Qeybtii 1-aad Silsilado Loogu Magacdaray Boorri Mu’miniinta (DAAWO+AKHRISO)
July 10, 2017 4:33 pm Views: 571
Mu’asasada Al-kataa’ib, garabka Warbaahineed ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay baahisay qeybtii 1aad ee silsilad loogu magacdaray boorri Mu’miniinta. Xalqadan koowaad waxaa lagu soo gudbinayaa kalimad aanan horay loo baahan oo uu jeedinayo Salmaan Al-Muhaajir oo ah halyeeygii fuliyey camaliyadii Kampala ee sanadkii 2010-ka.
Walaalaheyga Muslimiinta ee qaaliga ahow, waxaan rabaa in aan si kooban idiin kaga sheekeeyo farqiga u dhexeeya nolosha dunida iyo nolosha dambe ee Aakhira, labadan nolol gabi ahaanba waa kuwo kala duwan midba midka kale. Nolosha Aakhira sida uu Allaah balan qaadayba waa mid aan dhamaad lahayn xilli mida dunidu ay tahay mid gaaban oo aan dhamaaneysa. Xadiith laga wariyey Ibnu Cumar –isaga iyo aabihiisba Allaha ka raali noqdee- wuxuu Nabigu sheegay in ay haboon tahay in aan dunida ku ahaano sida qof qariib ah ama safarey ah. Dunidu waa sida guri laba al-baab leh, Waxaad ka soo galeysaa hal al-baab, ka dibna waxaad ka baxeysaa Al-baabka kale. Wax qiimo ah ma leh gabi ahaanba nolosha dunida.
Balse nolosha Aakhira si kastaba, sida Allaah iyo Rasuulkiisu tilmaameen, waa iyada nolosha dhabta ah ee ay hoboon tahay in mu’minku ku dadaalo. Mana ku heli kartaan raaxada Aakhiro wax aan ka ahayn dadaal. Waa in aad hubka qaadataan, Ogaadana idinkoo aanan hubka qaadan, suuragal ma ahan in diinta islaamka si dhameystiran looma dhaqan gelin geliyo. Waa in aan wadada Allaah ku dagaalanaa markaas Allaah wuu noo naxariisanayaa, Wuxuuna nagu abaalmarinayaa Janno.
Allaah caza wajalla, wuxuu noo balan qaaday Raaxo badan oo aan ku heli doono Aakhiro. Wuxuu noo balanqaaday webiyaal malab iyo caano ah oo ku yaalla Janada kuwaas oo aan ku raaxeysan karno, kuna dabaalaneyno . Weligaa dunidan ma ku aragtay dad ku dabaalanaya webi caano ah? Suureyso cadadka caanaha ay ee dadkaas oo kale ay ku dhex dabaalan karaan? Webiyaal malab ah ayaa qulquli doona dhinacyadiina, sidaad doonto ayaadna u cabi doontaan, malabkaasna ma ahan mid la mid ah kan hadda dunida yaalla oo kale ee laga dhaliyo shinida, ee waa malab uu Allaah caza wajala abuuray. Caanaha Janada ma ahan caano laga soo lisay Lo’da, Geela iyo ariga, ee waa kuwo uu Allaah u abuuray mu’miniinta.
Janada wuxuu Alle noogu diyaariyey dumar kuwaas oo aad kaga duwan dumarka dunida. Waa dumarka la yiraahdo xuurul-ceynta. La mid ma ahan dumarka dunida oo kale, ma damcayaan qof aanan adiga ahayn. Kuwani waa dumarka uu Allaah kuu abuuray Mujaahidoow. Walaalaheyga qaaliga ahow, nolosha runta ah waa mida aakhiro ee aan u deg-degno wadada Alle, sidoo kale difaacno diintiisa markaas darteed waxaa laga yaabaa in aan janno ku helno.
Walaalkeyga Muslimka ah ee weli dagan dhulka gaalada, ogoow joogitaankaada halkaas wax faa’ido ah kuma jirto. Waxa ku sugaya waa geeri xanuun badan iyo ciqaabta Allaah oo waqti waliba kugu dhici karta. Haddii Allaah uu doono in uu ku ciqaabana, Ogow ma jirto cid kaa bad-baadin karta ciqaabtiisa oo aan isaga ahayn. Walaalaha qaaliga ahow, aan soo degdegno anagoo qaadaneyna go’aan aan ku fulineyno waajibka Hijrada oo aan kaga soo tageyno dhulka gaalada, kuna imaaneyno dhulka Islaamka Haddii ay tahay Soomaaliya iyo haddii ay tahay dhulalka kale ee Jihaadkaba markaas waan u dagaalami karnaa wadada Alle.
Gabagabadii, Taasi waa waxa aan doonayey in aan idinku baraarujiyo, Waxaana Allaah Caza Wajala weydiisanayaa in uu idiin fududeeyo, idiina waafajiyo in aad soo sameysaan Hijro, Amiiradeenana kaga fududeysaan culeysyada ay kala kulmayaan waajibaadkooda.
ASC walal silsildi 1aad miyaad noogu soo celisaan wala saaraye